Bar Bar Nwa 5 ukwu Bar Bar Nwa 5 ukwu
Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya na obodo ugbo ndụ mgbe Bar Bar Nwa 5 ukwu bụ mobile oghere egwuregwu ị chọrọ tụlee akpọ. a mobile oghere UK n'elu elu egwuregwu na-egwuri na 15 paylines na-ofu ma i nwere ike ịgbanwe na mkpụrụ ego uru na mkpụrụ ego na-etoju dị ka kwa gị mkpa. The-eji obi ụtọ obodo music ke ndabere eme ka ụkwụ gị na ịme ọpịpị ya na-akụ. Ndabere oyiyi bụ a elu definition ala oru ubi na aturu nile na a windmil na a anya na-enye gị zuru okè obi na-adị otú a ugbo ndụ anya. Ị nwere ike ịhọrọ nzọ gị ego malite £ 0,15 na-ewu ya na a max nke £ 150 kwa atụ ogho.
Banyere Mmepụta nke Bar Bar Black Atụrụ 5 ukwu:
Nke a mara mma landscaped mobile oghere UK n'elu elu game e mepụtara site Microgaming, a Mmepụta na-ewu ewu na-eke egwuregwu na ezi uche themes na-eme ị na-eche na ị bụ akụkụ nke egwuregwu. Ha kere ọtụtụ mobile bases ohere mpere otú i nwere ike igwu egwu ma na-emeri ego ke laa.
a mobile oghere UK n'elu elu egwuregwu na-egwuri na asaa akpali nnọọ mmasị na akara nke nwa atụrụ, ọcha aturu, ugbo ụlọ, Baa, apụl, oroma, anyụ, brinjal na a ọka cob. The top na-akwụ ụgwọ ihe nnọchianya mgbe ise n'ime ha na-egosi gafee 2nd n'usoro bụ nwa atụrụ na 10000 ugboro stakes, ọcha na aturu na-akwụ 8000, 6000 ugboro na ugbo ụlọ na Baa payout bụ 5000 ugboro your eto. E nwere ihe abụọ bonus akara na nke a mobile oghere game; ha bụ egwuregwu logo na a akpa jupụtara ajị.
Anụ ọhịa na Gbasaanụ Atụmatụ: The ọhịa na a mobile oghere UK n'elu elu nọ n'ọnọdụ nile ma e wezụga ikposa na-anọchi anya na egwuregwu logo. Ise nke ya na a ogologo akara ke ufọt n'usoro nwekwara ike inye gị 20000 ugboro your eto. The akpa ajị bụ free spins achụsasịkwa na ọ na-enye gị 10, 15 ma ọ bụ 20 free spins na ya ọdịda 3, 4, ma ọ bụ 5 ugboro n'oge a atụ ogho. Ise nke a na-enye gị 15000 ugboro n'osisi tinyere free spins.
Black Atụrụ Multiplier: Atụmatụ a na-akpọ Bar Bar Black Atụrụ na dị ka aha na-atụ aro onye ahụ nke abụọ Bar akara tinyere a nwa atụrụ na a ogologo akara activates feature. ozugbo triggered, gị niile Enwee Mmeri na-uba site ruo 999 ugboro nke nwere ike ime ka ị ruru unyi ọgaranya.
Summary: a mobile oghere UK n'elu elu zuru okè ma ọ bụrụ na ị chọrọ Wager gị ego gị na-amụba ya ọtụtụ puku ugboro na-eme ka nnukwu ego. A egwuregwu n'ihi na oké njọ ndị na-eme ka ha dị ndụ site na-akpọ oghere egwuregwu.